Soomaali / Somali | Working with Children
Tusaha Macluumaadka Guud
Information about the Check in Somali
Waa maxay WWC Check?
Baarista Working with Children Check (Baarista) waxay gacan ka gaysataa ka ilaalinta carruurta waxyeelada galmada iyo mida jidheed ayadoo la hubinayo in dadka la shaqeeya, daryeela, carruurta ay maraan hab-raaca baaritaanka.
Kumaa u baahan Baarista?
Ayadoo la raacayo sharciga Working with Children Act 2005 (Sharciga), waxaad u baahan tahay Hubin haddii aad leedahay DHAMMAAN shuruudaha shantaa ee soo socda ee shaqada ilmaha la xiriirta.
Inaad tahay qof weyn kaas oo folanteeri ah ama mushaar ku qaata inuu la shaqeeyo carruurta da’doodu ka-hooseyso 18 sano
Inaad kala shaqaynayso carruurta mid ka mid ah adeegyada, goobaha ama haya’daha ku qoran Sharciga
Shaqadaada badanaa waxay ku lug leedahay xidhiidhka tooska ah ee carruurta, taasoo ay ku jiraan wada-xiriirka fool ka foolka ah, qoraalka, af iyo elektaroonika
Xiriirka aad la leedahy carruurta uu yahay qayb ka mid ah waajibaadkaaga uusan ku ahayna mar dhac shaqadaada*
Lagaama dhaafayo inaad marto Hubin ayadoo la raacayo Sharciga**.
* Sida ku xusan Sharciga, uma baahnid Baaritaan haddii shaqadaadu ay ku lug leedahay oo keliya xiriir toos ah oo mararka qaar lala yeesho cunugga oo shil ku dhaca shaqadaada.
**Faahfaahinta waxaad ka heleysaa website-ka La-shaqaynta Carruurta.
Waa dambi in la bilaabo shaqada la-xiriirta-ilmaha ayadoon la codsan Baarista marka kowaad. Si kastaba ha noqotee, marka aad codsato Hubinta, waxaad awoodi kartaa inaad bilowdo shaqo la xiriirta carruur (eeg hoosta - 'Ma shaqeyn karaa inta baaritaanka socdo?')
Haya’ddaada waxay kaloo galaysaa dambi haddii ay kaa codsadaan inaad bilowdo shaqada la-xiriirta-ilmaha ka-hor intaadan codsan Baarista.
Sidee u dalbadaa?
Gal oo Codso Hubinta (External link) websiteka oo markaas raac tilmaamaha
Waa dembi in loo adeegsado Hubinta Folanteeriga ee loogu talagalay shaqada mushaariga ee la xariira ee carruurta - Hubinta Shaqaalaha waa in loo adeegsadaa shaqooyinka mushaharka leh.
Ma shaqayn karaa inta baaritaanku ku socdo?
Sharcigu wuxuu u ogolaanayaa dadka intiisa badan inay qabtaan shaqada la xiriirta carruurta inta lagu jiro habka baaritaanka kaas oo dhaca mar haddii codsiga Hubinta la soo gudbiyo. Si kastaba ha ahaatee, sharci ahaan, waa inaadan shaqayn haddii:
lagugu eedeeyey, lagugu xukumay ama lagugu helay dambi galmo, rabshad ama dambi daroogo oo ku qoran faqradda 2aad ee Shaxda 3aad ee Sharciga
laguu diiday ugu dambayna aan ku gudbin Hubintii
ku kormeeraya ilmo shaqo sida waafaqsan Xeerka 2003 ee Shaqada Ilmaha
aad ka shaqayn doonto adeegga ay xukunto Sharciga Adeegyada Carruurta ee 1996 ama waxbarashada ama adeegga daryeelka marka la raaco Sharciga Qaranka Adeegyada Waxbarashada iyo Daryeelka 2010 (Victoria)
ku xiran tahay:
waajibaadka wargelinta ayadoo la raacayo Sharciga Diiwaangelinta Dembiilayaasha Galmada ee 2004
Amarka kormeerka la-ballaariyey ama amarka kormeerka la-ballaariyey ee ku-meel-gaarka ah ayadoo la raacayoSharciga Korjoogteynta Dembiilayaasha Galmada ee Daran 2005
Amarka kormeerka, ama amarka ii-hayda ama amarka ii-hayda ee degdegga ah.
Weydii haya’ddaada wax ku saabsan shaqaynta inta uu socdo habraaca baarista, maaddaama haya’daha qaarkood keliya ogolaadaan codsadeyaalka inay shaqeeyaan ka-dib markay ku gudbaan Baarista.
Maxaa la eegayaa?
In lagaa baaray dambiyada galmada, rabshadda iyo daroogada iyo warbixinnada asluubta xirfad-yaqaanimada daran oo ay sameeyeen haya’daha ku qoran Sharciga. Liiska danbiyadu wuxuu ku yaal website-kayaga.
Ka-ilaalinta carruurta xadgudubka galmada ama waxyeellada jidheed waa tigelinta kowaad ee go’aan kasta oo lagu sameeyey raacidda Sharcigan.
Sidee ku ogaanayaaa in aan ku gudbey WWC Check?
Waxaanu ogeysiin doonnaa adiga iyo haya’daadaba haddii aad ku gudubto Hubinta.
Hubintu waxay shaqaynaysaa shan sano haddii aadan jebin ama aadan ka noqonin.
Waa inaad codsataa dib-u-cusboonaynta Baaristaada ka-hor intaysan dhicin haddii aad doonayso inaad sii waddo qabashada shaqada la-xiriirta-ilmaha.
Maxaa dhacaya haddii aan leeyahay diiwaan dembiyeed ama warbixin dhaqan xumo oo lidu ah?
Dhammaan dembiyada oo dhan iyo go’aammada asluubta xirfad-yaqaanadu ee xun maahan micnaheedu inuu yahay inaad ku kici karto khatar galin aan macquul ahayn amniga carruurta sida waafaqsan Sharciga.
Inaad ku gudubto ama ku dhacdo Baarista waxay ku xiran tahay nooca warbixinnada asluubta xirfad-yaqaanimada daran, dambiga aad gashay, iyo duruufaha ku wareegsan arimahaas.
Waa sharci darro inaad dalbato Hubinta haddii aad:
ahay dembiilaha diiwaan-gashan ee hoos imaanaya Sharciga Diiwaangelinta Dembiilayaasha Galmada ee 2004
ku xiran tahay Amarka kormeerka la-ballaariyey ama amarka kormeerka la-ballaariyey ee ku-meel-gaarka ah ayadoo la raacayo Sharciga Korjoogteynta Dembiilayaasha Galmada ee Daran 2005
ku xiran tahay amarka iihaynta, amarka kormeerka ama amarka iihaynta oo degdeg ah.
Waxaa waajib kugu ah inaad raadiso tala sharciyeed oo madaxbanaan oo ku saabsan xaalladaha sharciyeed.
Maxaa dhacaya haddii aanan ku gudbin WWC Check?
Haddii aan rumaysan nahay inaad ku kici karto khatar galin aan macquul ahayn amniga carruurta, waxaan kuu sheegi doonaa inaan ku talojireyno inaan kaa mamnuucno inaad ka shaqeyso carruurta ayadoo lagu siinayo Ogeysiisnta Diidmada oo Ku-meel-gaadhka ah. Tan waxay ku siinaysaa fursad inaad na soo weydiiso inaan tixgelinno sababaha aad u maleyneyso inaad ku gudubto Hubinta.
Haddii, ka dib marka la tixgeliyo sababahaaga, aad ku dhacdo Hubinta, waxaan kuu soo siinayaa Ogeysiiska Diidmada oo aan kaa mamnuucayno inaad ka shaqeyso caruurta.
Duruufo kooban oo keliya, waxaad racfaan ka qaadan kartaa go’aankeena adigoo codsi usoo diraya Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) 28 cisho gudahood laga bilaabo taariikhda Ogaysiiska Diidmada. Kama codsan kartid VCAT dib u eegista go'aankeena haddii waqti kasta lagu eedeeyey, lagu xukumay ama lagugu helay dambiga nooca 'A' oo aad ahayd qof weyn waqtiga dembiga ama eedda lagu soo oogay. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nooca dambiyada A ka 'eeg daabacadda Liiska dembiyada (External link) oo ku qoran websiteka.
Sidee gaarnimadayda lagu xafidayaa?
Waxaa ku dhaqanaa sharciga gaarnimada iyo qarsoodiga. Sharciga Ka-shaqaynta Carruurta ee 2005, Sharciga Ilaalinta Gaarnimada iyo Macluumaadka iyo Ilaalinta Xogta ee 2014 iyo Sharciga Diiwaanka Caafimaadka ee 2001 ayaa qeexaya sidaan u ururino oo u isticmaalno macluumaadka shakhsiyeed.
Waa inaanu ogeysiinnaa haya’daada/haaga wixii go’aan kasta oo ku meel-gaar ah ama kama dambeys ah oo laga sameeyey codsigaaga, haddii Hubintaada la hakiyo, la buriyo ama la dhiibo ama haddaad ka noqoto codsiga. Haddaad haya’dda ka saarto diiwaanadaada, waxaan awood u leenahay inaan ku wargelinno haya’daha inaad ka saartay. Ma siin doono haya’daada wixii faahfaahin ah ee ku saabsan diiwaanka dembigaaga ama xirfadlahaaga.
WWC Check ma wuxuu la mid yahay Hubinta Booliiska?
Maya. Baarista Working with Children Check waxay baartaa diiwaannada asluubtaada dambiyeed iyo kuwa xirfadeed waxayna si xooggan u qiimaysaa wixii khuseeya dambiyo galmeed, rabshaded ama daroogeed ah ee noloshaada ah. Baarista Police Check waxay qortaa dambiyada dhaca mar ka mid ah waqtiga.
Baarista Working with Children Check waxay la-socotaa diiwaannada asluubta dambiyeed iyo kuwa xirfadeed ee haysteyaalka kaarka inta uu jiro kaarkoodu. Maadaama hubintu ay aad uga duwan tahay, ururada qaarkood ayaa sameeya labada Hubinba.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya hubinaha, ka eeg website-ka La-shaqeynta Carruurta, oo hoos yimaada 'Hubinta Booliiska (External link)’.
Kooxda Kaalmada Macmiilaha
8.30 subaxii – 5galabtii Isniinta – Jimcaha (marka laga saaro fasaxyada)
Hadal iyo Dhegaysi
Haddii aad u baahan tahay turjumaan, fadlan wac Translating and Interpreting Service taleefanka 13 14 50 waxaadna ka codsataa inay kula xiriiriyaan Khadka Taageerada Macaamiilka ee Working with Children.
Macluumaadkaan waxaa looga jeedaa tuse guud keliya. Loogama jeedo in la siiyo talo sharciyeed loogumana tashan karo sidaas. Waxaa la soo jeedinayaa inaad hesho talo sharciyeed oo ku saabsan xaalladaada gaar ahaaneed.